CIN Khabar नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको हो?
नेपालमा कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भएको हो? सरकार र विज्ञ के भन्छन् ?
स्नेहा कर्ण बुधबार, पुस २८, २०७८, ०३:२०:००
काठमाडौं । अघिल्लो हप्ताको बुधवार ४ सय ३५ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भयो । त्यसको दुई दिनपछि सङ्क्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या एक हजारको हाराहारीमा पुग्यो ।
अहिले त दैनिक सङ्क्रमित थपिनेदर २ हजार भन्दा धेरै पुगेको छ । एक सातामै कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या दोब्बरले बढेर १० हजार नजिक पुगेको छ ।
एक सातामै कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या दोब्बरले बढेर १० हजार नजिक पुगेको छ ।
एक साता अघि मात्रै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाकाले माघको दोस्रो साताबाट नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दर उच्च हुने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
तर, त्यसअघि नै सङ्क्रमण दर उच्च हुनुलाई कोरोनाको तेस्रो लहरको सुरुवातका रुपमा बुझ्न सकिने छातिरोग विशेषज्ञ डा.निरज बम बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार नेपालमा जुन गतिमा कोरोना सङ्क्रमित थपिन थालेका छन् त्यो सामान्य होइन ।
यदि समयमै सावधानी अपनाइएन भने यसले फेरि भयावह स्थिति निम्तिन सक्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामीले कोरोनाको दुई चरणको लहरको सामना गरिसकेका छौं । हामीसँग अनुभव पनि छ । तर, कोरोनाको ओमिक्रोनबारे अझै अनभिज्ञता कायमै छ । त्यसकारण पनि हामीले सावधानी अपनाउनै पर्छ ।’
यदि समयमै सावधानी अपनाइएन भने यसले फेरि भयावह स्थिति निम्तिन सक्छ ।
सरकारले तेस्रो लहर सुरु भएको औपचारिक घोषणा गरिसकेको त छैन तर अधिकारीहरूले अनौपचारिक कुराकानीमा तेस्रो लहर हो भन्न थालेका छन् ।
यसको विश्लेषण केन्द्रीय प्रयोगशालामा भइरहेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा.समिर कुमार अधिकारीले कोरोना सङ्क्रमित थपिनेको सङ्ख्यामा देखिएको उछाल कोरोनाको तेस्रो लहर हुन सक्ने बताउनुभयो ।
उहाँले पछिल्लो एक सातामा नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको दरमा देखिएको वृद्धिले चिन्ता बढाउँदै गरेको अवस्थामा सबैले सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा कोरोनाको तेस्रो चरणको लहर आउन सक्ने सम्भावना बुझेकै कारण सरकारले यसअघि नै सबै अस्पताललाई निर्देशन दिइसकेको उहाँको भनाइ छ ।
अमेरिका, बेलायत, भारतसहितका मुलुकमा कोरोनाका कारण दैनिक २ लाखभन्दा बढी व्यक्ति सङ्क्रमित हुन थालेका छन् । भारतमा बढेसँगै नेपालमा पनि एक सातादेखि कोरोना सङ्क्रमणको दर बढ्दै गएको छ ।
कोरोना सङ्क्रमित बढ्दै जाँदा यसअघिको पहिलो र दोस्रो लहरमा जस्तो मृत्यु हुनेदर बढेको छैन । यसलाई कतिपय विज्ञहरूले तेस्रो लहरको कम्जोर प्रभावका रुपमा व्याख्या गरे पनि कोरोनाले महामारीको रूप नलियोस् भन्नका लागि सावधानी अपनाउन छोड्नुहुँदैन ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि ओमिक्रोनको सङ्क्रमण गराउने दर बढी रहेकाले यसलाई सामान्य नठान्न भनिसकेको छ ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, पुस २८, २०७८, ०३:२०:००
राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि आजदेखि आचारसंहिता लागु